UMkomishinala oPhezulu waseCanada eJamaica utyelele noMphathiswa wezoKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » UMkomishinala oPhezulu waseCanada eJamaica utyelele noMphathiswa wezoKhenketho
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel
Ukutsalela umnxeba eJamaica
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett, obonwe ngasekunene emfanekisweni, ujoyine uMkomishinala oPhezulu wase-Canada eJamaica, uHloniphekileyo u-Emina Tudakovic (embindini) kunye no-Nobhala osisigxina kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezokhenketho, u-Jennifer Griffith, njengoko bemisa iilensi ngexesha lenkundla yokugqibela. Ukutsala umnxeba nguMkomishinala oPhezulu kwiiofisi ze-Ofisi yaseNew Kingston.
Kwitheyibhile yengxoxo bekukho iindlela apho iJamaica neCanada banokuqhubeka nokusebenzisana kwiindawo ezinjengokhenketho.
Icandelo lezokhenketho libonelela ngenjini yokukhula kuqoqosho lwaseJamaican.
Ubambiswano phakathi kwamacandelo karhulumente nawabucala luyafuneka ukuze kufikelelwe usukelo olubekiweyo, oluphambili kwizicwangciso zoMphathiswa Wezokhenketho.
Bazibandakanye kwingxoxo ebanzi malunga notshintsho kushishino lokuhamba emva kwesibetho se-COVID-19, kunye neendlela apho iJamaica neCanada bangaqhubeka nokusebenzisana kwiindawo ezinje ngezokhenketho.
The Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho Iiarhente zayo zikwiphulo lokuphucula nokuguqula imveliso yezokhenketho yaseJamaica, ngelixa iqinisekisa ukuba izibonelelo ezivela kwicandelo lezokhenketho ziyonyuswa kubo bonke abantu baseJamaica. Ukuza kuthi ga ngoku iphumeze imigaqo-nkqubo kunye nezicwangciso eziya kuthi zibonelele ngakumbi kwezokhenketho njengenjini yokukhula uqoqosho lwaseJamaican. ICandelo loMphathiswa lisazimisele ekuqinisekiseni ukuba icandelo lezokhenketho lenza elona galelo lipheleleyo kuJamaica kuphuhliso lwezoqoqosho ngenxa yomvuzo omkhulu.
Kwicandelo loMphathiswa, bakhokele ityala lokuqinisa amakhonkco phakathi kwezokhenketho kunye namanye amacandelo afana nezolimo, ukuvelisa, kunye nokuzonwabisa, kwaye ngokwenza njalo bakhuthaze wonke umntu waseJamaican ukuba adlale eyabo indima ekuphuculeni imveliso yezokhenketho yelizwe, ukugcina utyalo-mali, kunye nokwenza izinto zibe zezala maxesha. Ukwahlulwa kwecandelo ukukhuthaza ukukhula kunye nokudalwa kwemisebenzi kwamanye amaJamaica. UMphathiswa ubona oku kubaluleke kakhulu ekusindeni nasekuphumeleleni kweJamaica kwaye uyenzile le nkqubo ngokusebenzisa indlela ebandakanyayo, eqhutywa ziiBhodi zeeNdawo, ngothethwano olubanzi.
Ukuqonda ukuba intsebenziswano nentsebenziswano phakathi kwamacandelo karhulumente nawabucala kuyakufuneka ukufezekisa iinjongo ezibekiweyo, eyona nto iphambili kwizicwangciso zoMphathiswa kukugcina ubudlelwane babo nabo bonke abachaphazelekayo. Ngokwenza njalo, kukholelwa ukuba ngesiCwangciso esiyiNtloko soPhuhliso lwezoKhenketho oluZinzileyo njengesikhokelo kunye nesiCwangciso soPhuhliso seSizwe - uMbono wowama-2030 njengomgangatho - iinjongo zoMphathiswa ziyafezekiswa ukuze kuzuze bonke abantu baseJamaica.